China AWWA C509 C515 resilient ọdụ ọdụ valvụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị na -eweta ya Ọdịnihu
Nhazi na nrụpụta ： AWWA C509/C515
Ihu na ihu ： ANSI B16.10
Njedebe flanged ： ANSI B16.1/B16.42
Nnyocha ： AWWA C509/C515
Aha akụkụ Materia
Isi, ọkpọ Iron ductile
Diski Igwe ductile nwere EPDM/NBR
Azuokokoosisi Igwe anaghị agba nchara
Nke gara aga: Ihe nrụpụta DIN Y tụfuru ma fesaa ya
Osote: Valvụ ọnụ ụzọ ámá ANSI & valvụ ụwa
Valvụ ọnụ ụzọ ámá AWWA C509
Valvụ ọnụ ụzọ ámá AWWA C509 na -eguzogide
Valvụ ọnụ ụzọ ámá AWWA C515
Ogwe ọnụ ụzọ ọdụ ụgbọ mmiri AWWA C515 na -eguzogide
Valvụ ọnụ ụzọ ámá AWWA
Valvụ ọnụ ụzọ ọdụ ụgbọ mmiri AWWA na -eguzogide
valvụ ọnụ ụzọ ámá
valvụ ọnụ ụzọ na -eguzogide
Valve Gate ọdụ valvụ
API esorowo ígwè Gate valvụ - Klas 150 ~ ...
Ọnụ ụzọ ámá API - Klaasị 1500 & Klaasị 2500 valvụ ọnụ ụzọ ámá nke valvụ ọnụ ụzọ ámá nwere NPS≥2 nwere ọnụ ụzọ ámá na -agbanwe agbanwe; Valvụ ọnụ ụzọ nwere NPS <bụ nke ọnụ ụzọ siri ike nke anụ ahụ na njikọ njikọ ahụ na ọkpọ nke klaasị 150 ~ valvụ ọnụ ụzọ 900 na -ejikọkarị na studs na mkpụrụ; Na ahụ na ọkpọ nke klaasị 1500 ~ Klas 2500 valvụ ọnụ ụzọ ámá na -abụkarị nke akara akara nrụgide. Gasket nke Cover Flange Carbon steel ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara +graphite na -agbanwe agbanwe jikọtara gasket bụ u ...
Ọnụ ụzọ ámá API
Ọnụ ụzọ ámá API nke valvụ ọnụ ụzọ ámá diski nwere NPS≥2 nwere ọnụ ụzọ ámá na -agbanwe agbanwe; Valvụ ọnụ ụzọ nwere NPS <bụ nke ọnụ ụzọ siri ike nke anụ ahụ na njikọ njikọ ahụ na ọkpọ nke klaasị 150 ~ valvụ ọnụ ụzọ 900 na -ejikọkarị na studs na mkpụrụ; Na ahụ na ọkpọ nke klaasị 1500 ~ Klas 2500 valvụ ọnụ ụzọ ámá na -abụkarị nke akara akara nrụgide. Gasket nke Cover Flange Carbon steel ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara +graphite na -agbanwe agbanwe jikọtara gasket na -eji valvụ ọnụ ụzọ ámá 150; Igwe anaghị agba nchara +mgbanwe g ...
Ọnụ ụzọ ámá API - Klas 150 & JIS 10K ...
Valve Gate API - Klas 150 & JIS 10K valvụ ọnụ ụzọ ámá nke valvụ ọnụ ụzọ ámá diski nwere NPS≥2 nwere ọnụ ụzọ ámá na -agbanwe agbanwe; Valvụ ọnụ ụzọ nwere NPS <bụ nke ọnụ ụzọ siri ike nke anụ ahụ na njikọ njikọ ahụ na ọkpọ nke klaasị 150 ~ valvụ ọnụ ụzọ 900 na -ejikọkarị na studs na mkpụrụ; Na ahụ na ọkpọ nke klaasị 1500 ~ Klas 2500 valvụ ọnụ ụzọ ámá na -abụkarị nke akara akara nrụgide. A na -eji gasket nke mkpuchi Flange Carbon steel ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara +graphite na -agbanwe agbanwe jikọtara gasket.
Ọnụ ụzọ ámá API - Klas 1500 & Klas ...
Ọnụ ụzọ ámá API - Klas 300 & JIS 20K ...
Ọnụ ụzọ ámá API - Klas 300 & JIS 20K valvụ ọnụ ụzọ ámá nke valvụ ọnụ ụzọ ámá diski nwere NPS≥2 bụ nke ọnụ ụzọ ámá na -agbanwe agbanwe; Valvụ ọnụ ụzọ nwere NPS <bụ nke ọnụ ụzọ siri ike nke anụ ahụ na njikọ njikọ ahụ na ọkpọ nke klaasị 150 ~ valvụ ọnụ ụzọ 900 na -ejikọkarị na studs na mkpụrụ; Na ahụ na ọkpọ nke klaasị 1500 ~ Klas 2500 valvụ ọnụ ụzọ ámá na -abụkarị nke akara akara nrụgide. A na -eji gasket nke mkpuchi Flange Carbon steel ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara +graphite na -agbanwe agbanwe jikọtara gasket.
Valve Ọnụ ụzọ API - Klaasị 600 & Klas 9 ...
Ọnụ ụzọ ámá API - Klaasị 600 & Klaasị 900 valvụ ọnụ ụzọ ámá nke valvụ ọnụ ụzọ ámá diski nwere NPS≥2 nwere ọnụ ụzọ ámá na -agbanwe agbanwe; Valvụ ọnụ ụzọ nwere NPS <bụ nke ọnụ ụzọ siri ike nke anụ ahụ na njikọ njikọ ahụ na ọkpọ nke klaasị 150 ~ valvụ ọnụ ụzọ 900 na -ejikọkarị na studs na mkpụrụ; Na ahụ na ọkpọ nke klaasị 1500 ~ Klas 2500 valvụ ọnụ ụzọ ámá na -abụkarị nke akara akara nrụgide. Gasket nke mkpuchi Flange Carbon steel ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara +graphite na -agbanwe agbanwe jikọtara gasket bụ ihe eji ...
Valve Gate Gate API
API Slab Gate Valve Design nke valvụ ọnụ ụzọ ámá diski nwere NPS≥2 bụ ọnụ ụzọ ámá na -agbanwe agbanwe; Valvụ ọnụ ụzọ nwere NPS <bụ nke ọnụ ụzọ siri ike nke anụ ahụ na njikọ njikọ ahụ na ọkpọ nke klaasị 150 ~ valvụ ọnụ ụzọ 900 na -ejikọkarị na studs na mkpụrụ; Na ahụ na ọkpọ nke klaasị 1500 ~ Klas 2500 valvụ ọnụ ụzọ ámá na -abụkarị nke akara akara nrụgide. Gasket nke Cover Flange Carbon steel ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara +graphite na -agbanwe agbanwe jikọtara gasket na -eji valvụ ọnụ ụzọ ámá 150; Igwe anaghị agba nchara +flexi ...
Igwe anaghị agba nchara bọl valvụ, Valve Gate Valve, Ogwe bọọlụ Trunnion, Igwe anaghị agba nchara Gate Gate valvụ, Valve Gate Gate, Akuku Globe Valve,